रदिप र बिकासको जोडीको विजयी सुरुआत
काठमाडौं । हरिसिद्धि ब्याडमिन्टन क्लबको आयोजनामा हरिसिद्धि खुल्ला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता बिहीबारबाट सुरु भएको छ ।
प्रतियोगिताको पहिलो दिन आयोजक क्लबका रदिप महर्जन र बिकास महर्जनको जोडीले पुरुष युगल तर्फ बिजयी सुरुआत गरेका छन् । महर्जन जोडीले ईरा ब्याडमिन्टन क्लबका अनमोल के.सी. र विपिन श्रेष्ठको जोडीलाई २१–२, २१–६ ले पराजित गर्दै दोश्रो चरण प्रवेश गरेका हुन् ।
यस्तै बालकुमारी रिमिक्सका दिप्रिस मुनी बज्राचार्य र सुमन शाक्यको जोडीले पनि जित हात पारे । उक्त जोडीले कास्कीका बिशेष बस्नेत र यासिक्सन गुरुङ्गलाई २१–१२, २१–१३ को सहज जित निकाल्दै दोश्रो चरणमा प्रवेश गरेका छन् ।
दोश्रो चरण प्रवेश गर्ने क्रममा टु स्टार ब्याडमिन्टन क्लबका सुनिल कपाली र नगेन्द्र महर्जनको जोडीले डेभिड महर्जन र दिनेश महर्जनको जोडीलाई १३–२१, २१–१३, २१–१६, भक्तपुरका ध्रुव पाठक र यशराज राईको जोडीले हरिसिद्धि ब्याडमिन्टन क्लबका विक्रम महर्जन र धर्म महर्जनको जोडीलाई २१–१२, २३–२१ ले, राम प्रसाद चौधरी र धिरेन्द्र पटेलको जोडीले भानुदय ब्याडमिन्टन क्लबका अजय महर्जन र साजन मजर्हनको जोडीलाई १९–२१, २१–९, २१–१३ ले, साईनोका अभिषेक बोस र सुजन थापाको जोडीले श्रीकृष्ण ब्याडमिन्टन क्लबका पूर्ण बास्तोला र सुजन तोलाङ्गेको जोडीलाई २१–५, २१–६, बालकुमारी रिमिक्स क्लबका ज्ञान कुमार र राकेश शाक्यको जोडीले आयोजकका संजीप महर्जन र सोहन महर्जनको जोडीलाई २१–९, २१–९, दीपक ब्याडमिन्टन एकेडेमीका सुपाल बादे र राम मगरको जोडीले महाङ्काल ब्याडमिन्टन क्लबका अविक श्रेष्ठ र विकास तामाङ्गको जोडीलाई २१–१३, २१–१०, ठेचो ब्याडमिन्टन क्लबका आरसी बिष्ट र सुरज श्रेष्ठको जोडीले आयोजकका पुष्पेन्द्र महर्जन र तुलसी महर्जनको जोडीलाई १४–२१, २१–१९, २१–१४, आईबिएससीका मदन डङ्गोल र सुदीप श्रेष्ठको जोडीले लगनखेल ब्याडमिन्टन क्लबका राजेश बज्राचार्य र पुर्ण भक्त चित्रकारको जोडीलाई १८–२१, २१–१४, २१–१९, लुभुका सुरेश कोईराला र सुरोजदीप सिंहको जोडीले किसीपिडी ब्याडमिन्टन क्लबका प्रमोद महर्जन र सुमन महर्जनको जोडीबाट वाक ओभर, बालकुमारी रिमिक्सका आर्यन महर्जन र एलिश थापाको जोडीले आयोजकका सन्नी कुमार र बासुराम महर्जनको जोडीलाई २१–११, २३–२१, लुभुका बिमल ढुङ्गेल र राम तामाङ्गको जोडीले टु स्टार ब्याडमिन्टन क्लबका बुद्धि महर्जन र मनोज महर्जनको जोडीलाई २१–१७, १७–२१, २१–१५, आयोजक हरिसिद्धिका राजेन्द्र महर्जन र श्याम महर्जनको जोडीले लाकुरे ब्याडमिन्टन क्लबका राजु थापा मगर र कृष्ण श्रेष्ठको जोडीलाई २१–७, २१–१५, पिबिसीका उज्जवल दाहाल र श्रीजन ताम्राकारको जोडीले श्रीकृष्ण ब्याडमिन्टन क्लबका चन्द्र बस्नेत र नविन महर्जनको जोडीलाई २१–१३, २१–९, फ्रेन्डली ब्याडमिन्टन क्लबका योगेश खड्का र रमेश ठकुरीको जोडीले आयोजकका हरेराम महर्जन र ओम हरि महर्जनको जोडीलाई २१–११, २१–९ ले पराजित गरे ।
चारदिन सम्म संचालन हुने प्रतियोगिताको दोश्रो चरण प्रवेश गर्ने क्रममा १६ फिदरका क्षितीज खनाल र अमन महर्जनको जोडीले पनि जित निकाले । उक्त जोडीले बालकुमारी रिमिक्सका दउथ राई र दिपेश शाक्यको जोडीलाई २१–११, २१–११ले पराजित गरे । यस्तै आयोजकका निखिल भट्ट र बिवेक चौधरीको जोडीले भानुदय ब्याडमिन्टन क्लबका आशिष महर्जन र आयुव महर्जनको जोडीलाई २१–१२, २१–७ ले, टिकाभैरवका रामसरण महत र श्याम कृष्ण थापाको जोडीले टिकेश्वर ब्याडमिन्टन क्लबका धक अधिकारी र देवान खालिङ्गको जोडीबाट वाक ओभर, थेचो ब्याडमिन्टन क्लबका ईन्द्र कार्की र कृष्ण कुँवर ठकुरीको जोडीले आयोजकका हरि महर्जन र सन्तोष महर्जनको जोडीलाई २१–१७, २१–८ तथा बालकुमारी रिमिक्स क्लबका डि महर्जन र बि. श्रेष्ठको जोडीले टु स्टार ब्याडमिन्टन क्लबका सविन महर्जन र सुमन पोखरेलको जोडीलाई २१–१२, २१–८ ले पराजित गर्दै दोश्रो चरणमा स्थान पक्का गरे ।
प्रयिोगितामा यु १९ पुरुष तथा महिला एकल खुल्ला, पुरुष युगल र भेट्रान ४५ माथी गर चार विधामा प्रतिस्पर्धा हुने छ । यु १९ पुरुष एकल तर्फ ५० खेलाडी, महिला एकल तर्फ १३, पुरुष युगलमा ५५ जोडी र भेट्रान ४५ बर्ष माथी २१ जोडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् ।
प्रतियोगिताको संघिय साँसद राजकाजी महर्जनले उद्घाटन गरेका थिए ।